Mon, May 25, 2020 at 1:41pm
खोटाङ, १ जेठ बेरोजगार युवालाई आफ्नै देशमा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिकामा सवारी चालकसम्बन्धी तालीम शुरु गरिएको छ । गाउँपालिकाका ३० बेरोजगार युवालाई सवारीसाधन चलाउन सिकाएर स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले एक महीने तालीम शुरु गरिएको हो । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा कान्तिपुर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिले आयोजना गरेको सवारी चालक तालीममा पहिलो चरणअन्तर्गत हलुका सवारीसाधन चलाउन सिकाइने जनाइएको छ । तालीममा..
काठमाडौँ, ३१ वैशाख । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई आफ्ना गाउँघरमै रोजगारी दिन लागेको हो । कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका..
काठमाडौँ, ३१ वैशाख । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारी सूचीमा दर्ता भएका १ लाख ६ हजार ८ सय ७२ जनालाई ३० दिनकाे रोजगारी सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाे हाे । यस आर्थिक वर्षमा सय दिनकै रोजगारी दिन नसकिएकाले एक महिनाका लागि मात्रै रोजगारी दिने तयारी गरिएकाे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा २ अर्ब ३६ करोड ७९..
डोटी, ३१ वैशाख । डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ लडागडामा गएको तीन वर्षको अवधिमा १६३ बालविवाह भएको एक संस्थाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जिल्लामा लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामुदायिक विकास केन्द्र (सिडिसी) नामक एक संस्थाले तीन वर्षदेखि गरेको सर्वेक्षणअनुसार यति ठूलो सङ्ख्यामा बालविवाह भएको पाइएको हो । उक्त संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा विसं २०७३ मा ३८, २०७४ मा ५६ र..
अमरगढी, ३१ वैशाख । डडेल्धुराका अधिकांश वन जङ्गलमा डढेलो लागेको छ । अत्यधिक गर्मी बढेसँगै वर्षासमेत नहँुदा वन जङ्गलमा पातपतिङ्गर बढी सुकेका कारण अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष जिल्लाका सामुदायिकलगायतका वनमा डढेलो बढी लागेको हो । डढेलो नियन्त्रण हुन नसक्दा स–साना बोटबिरुवा जलेर मर्नेलगायत जनावर र चराचुरुङ्गीमा समेत नराम्रो असर पर्ने गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका सहायक वन अधिकृत प्रकाश..
काठमाडौँ, ३० वैशाख । पश्चिम न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले मुलुकभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षाको सम्भावना देखिएको छ । साथै मध्य क्षेत्रका केही स्थानमा र पूर्वी तराईमा हावाहुरीको सम्भावना देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यस मौसमी प्रणालीको प्रभावले पश्चिमबाट बादल आएर मौसममा बदली हुनुका साथै छिटफुट वर्षा भएको हो । यो मौसमी प्रणाली मध्य र पूर्वतिर सर्ने क्रममा रहेको..
बाँके, २९ वैशाख । नेपालगञ्जमा गर्मी अत्यन्तै बढेको छ । शनिबार यहाँको तापक्रम अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग फिल्ड कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार शनिबार यहाँका अधिकतम तापक्रम ४३ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । कार्यालयका मौसम विज्ञान सहायक योजना बस्ताकोटीले भन्नुभयो, “शनिबार नेपालगञ्जमा यो वर्षकै सबैभन्दा बढी तापक्रम मापन गरियो । जुन अघिल्ला वर्षको यही अवधिको..
बलेवा, २९ वैशाख । अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाका ५५० जना बेरोजगारको सूचीमा दर्ता भएका छन् । सरकारले सुरु गरेको बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलनको क्रममा गाउँपालिकाका ५५० ले बेरोगारको सूचीमा नाम दर्ता गराएका हुन् । रोजगार संयोजक विष्णुदेवी गैरेका अनुसार सबैभन्दा बढी काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानीका २४५, काठेखोला गाउँपालिका–१ का १४, वडा नं २ भीमापोखराका ४५, वडा नं ३ धम्जाका १००, ..
काठमाडौँ, २६ वैशाख सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित जमुनाका केवल राई बिहान ६ बजेभन्दा पहिले नै किसानका गोठ–गोठमा पुग्नुहुन्छ । आफ्नो गोठको गाईको दूध दोहेर घरकै डेरीमा खन्याएपछि उहाँ अरूका गोठमा पनि दूध लिन पुग्ने गर्नुहुन्छ । गाउँका दुई जनासहित केवल मिलेर गाउँभरिको दूध सङ्कलन गर्नुहुन्छ र दिउँसो घरमै दूध पेलेर घीउ र छुर्पी बनाउनुहुन्छ । घरमै डेरी सञ्चालन गरेका केवलले एक दिनमा २५० लिटर..
बाजुरा, २६ वैशाख । जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाले आगामी दुई वर्षभित्र प्रत्येक घरमा बिजुली र खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । “गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सबैको घरमा बिजुली र खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य छ”, गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले भन्नुभयो, “बिजुली, सडक र खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हुन्छ ।” जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये हिमाली गाउँपालिका सर्वाधिक विकट मानिन्छ । बिजुली र सडक..
दमौली, २५ वैशाख तनहुँ कारागारमा सजाय भोगिरहनुभएका होमबहादुर दर्जी तीन महीने सिलाइकटाइ तालीम लिएपछि उत्साहित हुनुहुन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र ब्यास नगरपालिकाको सहयोगमा कारागारमा सञ्चालित सिलाइकटाइ तालीमले उहाँलाई स्वरोजगार बन्न उत्प्रेरणा जगाएको छ । कारागारमा यत्तिकै बस्नुभन्दा केही सीप सिक्ने इच्छा बमोजिम तालीममा सहभागी हुनुभएका उहाँले सीप सिकेपछि अब कामको माग गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सीप त सिकियो,..
भीमदत्तनगर, २४ वैशाख इच्छा शक्ति र कामप्रतिको लगाव भए जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइलाई कुस्तीका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी नरेन्द्र खत्रीले सही सावित गर्नुभएको छ । झण्डै एक दशकसम्म कुस्ती खेलमा प्रतिष्पर्धा गर्नुभएका कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–६ वैजनाथ टोलका नरेन्द्र खत्री पछिल्लो समय यहाँका सफल मौरीपालन व्यवसायी बन्नुभएको छ । चार वर्षदेखि घरमै विदेशी जातको मौरी भित्र्याएर व्यावसायिक मौरीपालन थाल्नुभएका ४३..
पोखरा, २४ वैशाख । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले माछापुच्छ्रे हिमालको पानी गाउँपालिकाभित्र ल्याउने गरी बृहत् योजना अघि सारेको छ । यसका लागि गाउँपालिकाले ‘एक घर, एक धारा’ अभियानलाई अगाडि बढाएको हो । गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नै एक घर, एक धारा अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । माछापुच्छ्रे हिमालको फेदी (मर्दी हिमाल नजिकै)को लान्द्रुक बनबाट पानी ल्याउने गरी गाउँपालिकाले सम्भाव्यता..
काठमाडौँ, २२ वैशाख राजधानीको मुटुमा रहेको सङ्घीय संसद् भवनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दा कर्णालीमा बाटाबाटै नुन बेचिन्छ, चामल बेचिन्छ । अरू धेरै चीज बेचिन्छ । यो प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद गजेन्द्र महतको भनाइ हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै सांसद महतले कर्णाली प्रदेशलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नगरेकामा गुनासो..
चितवन,२२ वैशाख चितवनको कालिका नगरपालिकामा पानीको मुहान नजिकै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि संरचना बनाउँदा खानेपानीको मुहान नै सुकेको छ । वडा नं–८ जुटपानी बजार नजिकै रहेको दुई वटा खानेपानीको मुहानमा क्रसर सञ्चालन हुँदा गाउँमा खानेपानीको हाहाकार भएको हो । मुहान सुकेपछि बाँसघारी मझुवा बुलबुले खानेपानी उपभोक्ता समूह र मझुवा बुलबुले खानेपानी उपभोक्ता समूहका उपभोक्ता खानेपानीको समस्यामा परेका छन् । मनकामना क्रङ्क्रिट उद्योगले..
काठमाडौं, २२ बैशाख आइतवार विश्व हाँसो दिवस । हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि एकदमै फाइदा हुन्छ । हामी हास्दा हाम्रो शरीर पूर्ण रुपमा स्वतनत्र हुन्छ जसले गर्दा शरीरका अङ्गहरु पूर्ण बिकसित हुन् सक्छ। हाँसोमा आधारित योगा अभियान ‘वल्र्डवाइड लाफ्टर योगा मूभमेन्ट’ चलाइरहेका मुम्बईका चिकित्सक डा. मदन कटारियाको पहलमा सन् १९९८ देखि विश्व हाँसो दिवस सुरु भएको हो । यो दिवस हरेक वर्षको मे..
निःशुल्क दुर्घटना बिमा कार्यक्रमले श्रमिक मजदूरमा खुशीयाली
बेझाड, २० वैशाख । निःशुल्क दुर्घटना बिमा कार्यक्रमले श्रमिक मजदूरमा खुशीयाली छाएको छ । रामपुर क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका मजदूरलाई दृष्टिगत गर्दै पूर्वी पाल्पा मजदूर व्यवस्थापन समितिले निःशुल्क दुर्घटना बिमा कार्यक्रम ल्याएकाले यहाँका मजदूर उत्साहित भएका हुन् । मजदूरको हकहित तथा मजदूरी पेशालाई सम्मान दिन, उनीहरुमाथि भविष्यमा आइपर्ने घटनालाई दृष्टिगत गर्दै निःशुल्क दुर्घटना बिमागराउन थालिएको समितिका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । ..
काठमाडौँ, २० वैशाख सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन) ऐन २०६८ ले व्यवस्था गरेअनुसार काठमाडौँका ठूला सरकारी अस्पतालबाट सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग र बेचबिखन निषेध गर्न लागिएको छ । ऐनले व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिकरुपमा लागू हुन नसकेकाले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको अगुवाइमा पहिलो चरणमा काठमाडौँका ठूला १० अस्पतालमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो । धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले मानव जीवनको..
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस : साहसिक पत्रकारहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने दिन
काठमाडौँ, २० वैशाख : सन् १९९३ देखि मे ३ तारिखलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले निर्णय गरेर आह्वान गरेअनुसार यो दिवस हरेक सदस्य राष्ट्रमा मनाउने प्रचलन शुरु भएको हो । यो वर्ष राष्ट्रसङ्घकै आयोजनामा इथियोपियाको राजधानी आदिस अबावामा विशेष सम्मेलन भइरहेको छ । यो किन पनि महत्वपूर्ण छ भने सन् १९९१ मा अर्को अफ्रिकी राष्ट्र..
सल्यान, १९ वैशाख । सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका साढे दुई हजारभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण नहँुदा समस्या भएको छ । नगरपालिकाले छ महीनादेखि सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्न नसकेपछि सामाजिक सुरक्षाभत्तामा आश्रित ज्येष्ठ नागरिक प्रभावित हुन थालेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाएपछि आफूहरुलाई समस्या पर्न थालेको ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ । वनगाड कुपिण्डे–५ चिउराका ८० वर्षीय पुरनसिंह नेपालीले आफूले त्यही भत्ताबाट..
मुक्तहलिया भन्छन्– ‘बास त भयो, गाँस भएन’
भीमदत्तनगर, १९ वैशाख । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–१९ बागफाँटास्थित चौधर नदीको छेउमा ४८ वर्षीय धनीराम लुहार घर बनाउँदै गरेको अवस्थामा भेटिनुभयो । दश वर्ष हलिया बसेपछि विसं २०६५ मा मुक्त भएका धनीरामले बितेको एक दशकमा पनि अरुको घरमा काम गरेर परिवारको जोहो गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । “साहुबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा बुवाले जीवन नै अरुको घरमा काम गरेर बिताउनुप¥यो”, धनीरामले रासससँग भन्नुभयो, “सरकारले मुक्त..
कमाएर घर बनाउँदै मुक्त कमलरी
काठमाडौं, १८ बैशाख । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै हातमा सीप भएका मुक्त कमलरीको पनि जीवन फेरिएको छ । बुबाले साहुबाट लिएको रु ३०० ऋण तिर्न करीब एक वर्ष यहाँस्थित भाषी भन्ने ठाउँमा कमलरी बसेकी कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–९ लालपुरकी २४ वर्षीया मुक्त कमलरी पुष्पा डगौरा यतिबेला परिवार हाक्ने अब्बल महिला सावित हुनुभएको छ । “भाषी र काठमाडौँ गरी ११ वर्ष कमलरी बसें” उहाँले..
क्यामोमाइल खेती आम्दानीको गतिलो स्रोत बन्दै
कञ्चनपुर, १८ वैशाख शुक्लाफाँटा नगरपालिका–८ बेलडाँडीका तेजबहादुर चौधरीले तीन महीनामै चार कठ्ठा जग्गामा क्यामोमाईल नामक जडीबुटी खेती गरेर रु ५३ हजार रकम आम्दानी गर्नुभएको छ । क्यामोमाइलखेती गरेको जग्गामा अन्न लगाउँदा मुस्किलले रु पाँच हजारदेखि रु सात हजार बराबरको मात्रै उत्पादन हुने गरेको थियो । थोरै समयमा कम मेहनेतमा धेरै आम्दानी हुँदा परिवारको खर्च जुटाउन भारत तर्फ जानुपर्ने दिनको अन्त्य भएको चौधरीले..
उपभोक्तालाई दैनिक १ करोड लिटर प्रशोधित पिउने पानी वितरण
हेटौँडा, १७ वैशाख प्रदेश ३ हेटौँडा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले हेटौँडामा दैनिक एक करोड ३० लाख लिटर प्रशोधित पिउने पानीको सङ्कलन गर्ने गरेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको विभिन्न वडामा स्थानीय उपभोक्तालाई अहिले दैनिक एक करोड ८ लाख लिटर प्रशोधित पिउने पानी वितरण गर्दै आएको सो कार्यालयले जनाएको छ । वर्षातको मौसममा एक करोड ४० लाख लिटर पिउने पानी सङ्कलन हुने गरेको बताइएको छ..
घरमा खाना महिलाले पकाउने, तर खाने पालो किन अन्तिममा ?
काठमाडौँ, १७ वैशाख तपाईँको घर वा छिमेकमा परिवारका अन्य सदस्यले खाना खाइसकेपछि अन्तिममा मात्र बुहारीले खाने चलन छ? कैयौँ घर परिवारमा त्यस्तो परम्परा जीवित पाइन्छ। तर विज्ञहरू भन्छन्, त्यसको असर बुहारीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्छ। गर्भवती महिलाले त्यो चलन पछ्याउने हो भने त गर्भको बच्चालाई समेत असर पर्ने उनीहरु बताउँछन्। अनुभव पछिल्लो समय सहरमा बसेका एकल परिवार र कामकाजी महिलाका हकमा भने यो चलन लचिलो..
देशको पहाडी भूभागमा मंगलबार हावाहुरीसहित वर्षा हुने
काठमाडौं, वैशाख १७ मंगलबार देशको पहाडी भु–भागमा आंशिक बदली रहनेछ भने बांकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वामान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अन्सार पहाडी भेगका थोरै स्थानहरुमा अपरान्ह वा साँझपख मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको संभावना रहेको छ। साथै पश्चिमी भेगका एक–दुई स्थानमा सामान्य हुरी÷बतास चल्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी रातिको सयमा देशका पहाडी भेगमा मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही थोरै..
राउटे जाती भन्छन् - सरकार हामीलाई खाद्यान्न र पाल देऊ
दुल्लु, १६ वैशाख सामान्यतया, चैत वैशाखमा अत्यधिक गर्मी हुन्छ । तर यो वर्ष चैत वैशाखमै बर्खा लागेजस्तै भयो । त्यही कारण खोलाको बिचमै बसेका फिरन्ते जाती राउटे खोला बढ्ने डरले अली पर सरेका छन् । सुर्खेतको गुर्माकोट नगरपालिका–१३ बेतेनी खोला बिचमै बसेका राउटे समुदाय खोला तर्काउन लगाइएको तटबन्धदेखि करीब दुई समय मिटर पर बसाइँ सरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा डिला सङ्ग्रौला..
१० औं वर्षमा हेल्दी होम : १० औं शाखाको भव्य उद्घाटन, उत्पादनमा जाने लक्ष्य
सल्लाघारीरोड, भक्तपुर, १५ बैशाख । विशेगरी ‘नेचुरल वेट लश क्लिनिक’ का रुपमा स्थापित हुँदै गरेको हेल्दी होम ले संस्था १० औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा भक्तपुरमा शाखा विस्तार गरेको छ । हेल्दी होमले शनिबार एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्दै भक्तपुरको सल्लाघारीमा आफ्नो १० औं शाखाको उद्घाटन गरेको हो । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण भण्डारीले १० औं शाखाको विस्तारले आफूहरुमा नयाँ उत्साह..
बर्दियामा वर्षकै बढी गर्मी, लू चल्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित
राजापुर, १४ वैशाख । बर्दियामा यस वर्षकै सबैभन्दा बढी गर्मी भएको छ । अत्यधिक गर्मीका कारण यस क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । अत्याधिक गर्मीकै कारण जनजीवन र व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । वैशाखको दोेस्रो सातामै बर्दियाको तापक्रमले ४५ डिग्री नाघ्नुका साथै दिनभरि तातो हावा (लू) चल्न थालेपछि यहाँको जनजीवन निकै अस्तव्यस्त बनेको हो । अत्याधिक गर्मीले गर्दा सर्वसाधारण न्यून सङ्ख्यामा मात्र घरबाहिर निस्कने..
विश्वमा खुशी कम, तनावग्रस्त मानिसको सँख्या अत्यधिक
काठमाडौँ, १४ बैशाख विश्वभरिका मानिसहरू बढी रिसाहा, तनावग्रस्त र चिन्तित हुँदै गएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । संसारका १४० देशका १५०,००० भन्दा बढी मानिसहमा गरिएको अध्ययनमा उनीहरूमध्ये एक तिहाइले तनावग्रस्त भएको र पाँचमा एकजनाले दुःखी भएको वा रिसाएको बताएका छन् । वार्षिक ग्यालप ग्लोबल इमोशन्स रिपोर्टले मानिसहरूलाई सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरू सोध्ने गर्छ । प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा नकारात्मक देश चाड र नाइजर हुन् भने सबैभन्दा..
Results 740: You are at page 14 of 25